ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီများမှလိုင်စင်? FIDULINK ကျွမ်းကျင်သူရှေ့နေများအကြံပေးများ
Fidulink သည်နှစ်ပေါင်း ၁၀ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း၎င်း၏ဖောက်သည်များအားအကြံပေးခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဘဏ္tradingာရေးကုန်သွယ်ရေးလိုင်စင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့မှသာသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ဘဏ္tradingာရေးကုန်သွယ်ရေးလိုင်စင်ရယူရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကမ္ဘာ၏တရားစီရင်မှု ၅၆ ခုတွင်ပါ ၀ င်သောဖိုင်၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောနှင့်တံခါးသော့ဝန်ဆောင်မှု။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိဘဏ္tradingာရေးကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်မှအထူးကုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်သင်၏ဘဏ္tradingာရေးကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရရန်မှာရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးအတားအဆီးတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါ။
FIDULINK ဘဏ္clientsာရေးကုန်သွယ်ရေးလိုင်စင်ဖိုင်၏တောင်းဆိုချက်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖောက်သည်များအားအပြည့်အဝကူညီသည်။ အဆိုပါအေးဂျင့်များ FIDULINK သင်၏ဘဏ္tradingာရေးကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာဖိုင်ကိုစုစည်းထားသည်။
ဘဏ္tradingာရေးကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံရန်အကြံပေးကိုသာလျှောက်ထားပါ FIDULINK.
သင်၏ဘဏ္inာရေးကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည် FIDULINK သင်၏ဘဏ္financialာရေးကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ လိုင်စင်လျှောက်လွှာဖိုင်ကို စုစည်း၍ ဘဏ္tradingာရေးကုန်သွယ်မှုလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဘဏ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ သင့်ရဲ့ web platform ကို၏။